Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - Activities
[ , , ] Ny iray amin'ireo mahafinaritra indrindra fitakiana avy Benoit et al. (2015) amin'ny vahoaka-Coding ny fandaharan'asan'izy ara-politika dia ny vokatra dia reproducible. Merz, Regel, and Lewandowski (2016) dia manome fahafahana hahazo ny Manifesto Corpus. Miezaha miteraka Fig 2 avy Benoit et al. (2015) mampiasa mpiasa avy amin'ny Amazon Mechanical Turk. Ahoana koa no ny vokany?
[ ] Ao amin'ny InfluenzaNet tetikasa an-tsitrapo ny olona tontonana tatitra ny tranga, fielezan'ny, ary fahasalamana mifandray amin'ny fitondran-tena mitady gripa-toy ny-aretina (Ili) (Tilston et al. 2010; Noort et al. 2015) .
Ampitahao sy mifanohitra ny endrika, fandaniana, ary angamba fahadisoana in InfluenzaNet, Google Trends gripa, ary rafitra nentim-paharazana ampy gripa.
Indro misy mitebiteby ny fotoana, toy ny gripan-kisoa valan'aretina. Farito ny mety fahadisoana isaky ny rafitra.
[ , , ] The Economist dia iray isan-kerinandro gazety vaovao. Hamorona olombelona computation tetikasa mba hahitana raha ny tahan'ny ny vehivavy ny lehilahy eo amin'ny fonony dia nitombo rehefa mandeha ny fotoana.
Ny gazety samihafa afaka manana fonony any amin'ny faritra valo samihafa (Afrika, Azia Pasifika, Eoropa, Vondrona Eoropeana, Amerika Latina, Afovoany Atsinanana, Amerika Avaratra, ary United Kingdom) ary afaka rehetra dia alaina amin'ny tranonkala ny The Economist . Haka ny iray amin'ireny faritra sy hanao ny fanadihadiana. Aza adino ny hamaritana ny fomba fiasan'ny amin'ny antsipiriany ampy fa afaka ho replicated amin'ny alalan'ny olon-kafa.
Ity fanontaniana aingam-panahy avy amin'ny tetikasa mitovy amin'ny Justin Tenuto, ny angon-drakitra mpahay siansa ao amin'ny orinasa ny crowdsourcing CrowdFlower , jereo ny "Time Magazine Tena Likes Dudes" .
[ , , ] Fanorenana ny fanontaniana etsy ambony, ankehitriny hanao ny fanadihadiana rehetra faritra valo.
Inona no fahasamihafana hitanao manerana faritra?
Manao ahoana ny habetsahan'ny fotoana fanampiny sy ny vola izy io mitondra tena habeny-up ny fanadihadiana rehetra valo ny faritra?
Aoka hatao hoe ny Economist manana fonony 100 samy hafa isan-kerinandro. Tombanan'ny tena fanampiny fotoana sy ny vola ho azy hitondra tena habeny-up ny fanadihadiana ny 100 fonony isan-kerinandro.
[ , ] [Kaggle] (https://www.kaggle.com/) dia vohikala misokatra izay Tompon'ny maro antso tetikasa. Mandray anjara amin'ny iray amin'ireo tetikasa ireo.
[ ] Jereo ny alalan 'ny olana vao haingana ny gazety ao an-tsaha. Misy taratasy izay mety efa reformulated toy ny antso misokatra tetikasa? Nahoana na nahoana no tsy?
[ ] Purdam (2014) Nilaza ny nizara fanangonana antontan'isa mikasika ny mpangataka any Londres. Fintino ny tanjany sy ny fahalemeny ny nanaovana fikarohana izany.
[ ] Leon'ny dia fomba lehibe mba hijery ny toetra ny nizara fanangonana antontan'isa. Windt and Humphreys (2016) hampitombo sy hizaha toetra ny rafitra mba hanangona tatitra mikasika ny zava-nitranga avy amin'ny olona ady tao Eastern Congo. Vakio ny taratasy.
Ahoana no hahazoana antoka ny endrika leon'ny?
Dia manolotra fomba maro mba hanamafy ny angon-drakitra nangonina avy amin'ny tetikasa. Fintino ireo. Izay tena mandresy lahatra anao?
Soso-kevitra iray vaovao ny angon-drakitra fomba izay mety ho nanan-kery. Soso-kevitra dia tokony hiezaka ny hampitombo ny fahatokiana fa tsy maintsy ao amin'ny antontan-kevitra amin'ny fomba izay no vola lany-mahomby sy ny etika.
[ ] Karim Lakhani sy ny mpiara-miasa aminy (2013) Namorona misokatra antso mba mangataka algorithms vaovao hamaha ny olana amin'ny kajy amin'ny solosaina, zavamananaina. Dia nandray anjara maherin'ny 600 tantara foronina 89 kajy amin'ny solosaina, misy fomba. Ao amin 'ny fandraisana anjara, dia nandray 30 izay nihoatra ny fanatontosana ny US National Institiota ny Fahasalamana ny MegaBLAST, ary ny tsara indrindra na lehibe nahavita manaiky marina sy ny hafainganam-pandeha (1.000 in-haingana).
Vakio ny taratasy, ary avy eo dia soso-kevitra ny fiaraha-monina fikarohana momba ny olana izay mety hampiasa ny mitovy karazana fifaninanana misokatra. Indrindra indrindra, io karazana fifaninanana misokatra dia mifantoka amin'ny mampahafaingana sy manatsara ny fanatanterahana ny iray efa misy algorithm. Raha toa ka tsy afaka mieritreritra ny olana toy izany tany an-tanimbarinao, miezaka ny hanazava ny antony tsy.
[ ] Maro ny olona computation tetikasa miantehitra amin'ny mpandray anjara avy amin'ny Amazon Mechanical Turk. Sign-up ho lasa mpiasa ao amin'ny Amazon Mechanical Turk. Mandany ora iray niasa tao. Ahoana no fiantraikan'ny izany ny eritreritrao momba ny endrika, tsara, sy ny fitsipi-pitondrantena ny olona compuation tetikasa?